Reign of Assassins (2010) ရုပ္ရွင္ဝါသနာရွင္အခ်င္းခ်င္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘယ္သိုင္းကားအၾကိဳက္ဆံုးလဲလို႕ ေမးရင္ အျမဲတမ္း စေျပာမိတာက အခုတင္ေပးထားတဲ့ Reign of Assassins ပါပဲ။အခုေနာက္ပိုင္း ထြက္ေနတဲ့ အထူးကြန္ျပဴတာဖန္တီးမႈလိႈင္လိႈင္နဲ႕ ကႏြဲ႕ကလ် သိုင္းသမားကားေတြနဲ႕ တျခားစီပါပဲ။ ဇာတ္လမ္း ဒိုင္ယာေလာ့ တိုက္ခိုက္ခန္းတြ အားလံုးျပည့္စံုပါတယ္။အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့ သိုင္းေတြကို လွလွပပ ရိုက္ျပသြားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အနည္းဆံုး ၅ ေခါက္ေလာက္ေတာ့ ျပန္ၾကည့္မိပါေသးတယ္။ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ေျပာျပပါ့မယ္။သိုင္းေလာကမွာ သတင္းတစ္ခုရိွပါတယ္။ ေဗာဓိဆရာေတာ္ရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို ရရင္ သိုင္းေလာကတစ္ခုလံုးကို အုပ္စိုးႏိုင္မယ္ ေရာဂါအားလံုးလည္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မယ္ေပါ့။ အဲဒီအေလာင္းကိုရဖို႕ အားလံုးတိုက္ခိုက္ေနၾကခ်ိန္မွာ အလြန္အစြမ္းထက္တဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ လူသတ္သမားအဖြဲ႕ ေက်ာက္မည္းဂိုဏ္းပါ ပါဝင္လာပါတယ္။အဲဒီဂိုဏ္းရဲ႕ နာမည္ၾကီး လူသတ္သမား မိုးဖြဲ(မစ္ခ်ဲယို) ဟာ အေလာင္းတစ္ဝက္ကို ရသြားျပီး အေၾကာင္းတစ္ခုနဲ႕ ဇာတ္ျမွပ္သြားပါတယ္၊ ...
The Warrior’s Way (2010) "This is the Story ofaSad Flute....a Laughing Baby andaWeeping Sword."ျဖဴစင္စြာရယ္ေမာေနတဲ့ကေလးေလးနဲ႕ ၀ိဥာဥ္ေတြရဲ႕ငိုသံေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ဓား တို႔ရဲ႕ ၀မ္းနည္းသံစဥ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္အႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆုံးေသာ ဓားသမားျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ စစ္သည္တစ္ဦးသူအလိုခ်င္ဆုံးအရာကိုရရွိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရာအားလုံးဘာမွမရွိ(ေပ်ာက္ကြယ္သြား)ေတာ့သလိုခံစားလိုက္မိတဲ့ စစ္သည္ တျပိဳက္နက္ထဲမွာပဲ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး မႀကံဳဖူးမခံစားဖူးေသးတဲ့ ကေလးရဲ႕ရယ္သံေလးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့ေမတၱာ ဒါေပမယ့္လဲ ကံၾကမၼာရဲ႕လွည့္ကြက္ဆိုသလို ကေလးေလးက သူ႔ရဲ႕ရန္သူေတာ္ဂိုဏ္းကမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္ဒါေပမယ့္လဲ အခ်စ္နဲ႕အမုန္းလြန္ဆဲြလိုက္တဲ့အခါ အခ်စ္ကအႏိုင္ရၿပီး ကေလးကိုပိုက္ကာ အေ၀းကိုထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္အဲ့အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စစ္သည္ဟာ သူ႔ဂိုဏ္းရဲ႕Black list ထဲအထည့္ခံရမယ္ဆိုတာ အတိအက်သိေနေပမယ့္လည္းေပါ့အဲ့လိုနဲ႕ သူ႔မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္ဦးရွိတဲ့ အေနာက္ဖက္ကိုခရီးထြက္လာခဲ့တယ္သူ႔မိတ္ေဆြကဆုံးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ အ၀တ္ေလွ်ာ္လုပ္ငန္းကိုျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရင္း ဇာတ္ျမဳပ္ေနလိုက္ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ဓါးကိုပါ ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္ရင္းေပါ့တစ္ေန႔ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဓါးကိုမသုံးမျဖစ္သုံးရမယ့္အခ်ိန္လဲေရာက္လာေရာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားမလဲဆိုတာကေတာ့....ဓါးသမားစစ္သည္အျဖစ္ ကိုရီးယားမင္းသား ဒါရိုက္တာ ရင္ အျဖစ္တစ္ခ်ိန္ကျမန္မာျပည္ပရိသတ္ေတြအကၽြမ္း၀င္ခဲ့သူ Jang Dong Gunမင္းသမီးကေတာ့ superman returns(2006)ထဲက Lois Lane အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ Kate Bosworthေနာက္ထပ္သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးကေတာ့ Pirates ...
Flipped(2010) Flipped(2010) IMDb....7.7 လူ႕တုိ႕ရဲ႕ သေဘာဟာ ဆန္းက်ယ္တယ္ထင္ပါရဲ႕..ခ်ဳိဆိမ့္တဲ့အရသာကုိ ၾကဳိက္ၾကသလုိ ဖန္ငန္စပ္ အရာသာကုိလည္းၾကဳိက္ၾကတာပဲ.. ဒီလုိပဲ အခ်စ္၊အလွ ၊အလြမ္းဆုိတဲ့ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံတဲ့ ခံစားမႈစည္းစိမ္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသလုိ ၾကမ္းတမ္းထိတ္လန္႕စရာ စည္းစိမ္ကုိလည္း ႏွစ္သက္ၾကတာပါပဲ...မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ အခ်စ္၊အလွ ၊အလြမ္းဖြဲ႕ဇာတ္ကားေလးေတြခံစားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီကားေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္... ၂တန္းကေလးအရြယ္ ဘရိုက္စ္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးတို႕မိသားစုက ဂ်ဴလီဆိုတဲ့ေကာင္မေလးရွိတဲ့ အိမ္နားကိုေျပာင္းလာတယ္.. . ေကာင္မေလးကေတာ့ပထမဆံုးေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းေကာင္ေလးရဲ႕ ေတာက္ပတဲ့မ်က္လံုးေတြနဲ႕အၾကည္႕ ခ်င္းဆံုမိျပီး သေဘာက်သြားတယ္.. ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ေကာင္ေလးက သူ႕ကိုတစ္စက္ကေလးမွသေဘာမက် စိတ္ပ်က္စရာေကာင္မေလး အျမင္ကပ္စရာေလးလို႕ပဲျမင္ေနတာပါပဲ... ဒီကားက ေကာင္မေလးရဲ႕ အျမင္ရယ္ ေကာင္ေလးရဲ႕အျမင္ရယ္ကုိ အခ်ဳိးက်ျပသသြားတယ္... ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတြ႕ႀကဳံခံစားသိျမင္ပုံေလးေတြကုိ လွလွပပေလးရိုက္ျပသြားတာပါ . ..တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲကုိေရာက္ေနသလုိေတာင္ခံစားရႏုိင္တယ္.. .အယ္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူေတြအတြက္ ငယ္ဘ၀ ငယ္ခ်စ္ဦးကုိ ျပန္လြမ္းဆြတ္တမ္းတၿပီး အလြမ္းေျပစရာတစ္ခုခုဖန္တီးသြားေလာက္တယ္... ဥပမာ ငယ္ငယ္ကခ်စ္ဖူးခဲ့တဲ့သူအတြက္ရည္စူးေရးစပ္ထားဖူးတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္အေဟာင္းေလးေတြကုိေတာင္ျပန္ဖတ္သြားတာမ်ဳိးေပါ့... အယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဆင္ျခင္စရာေလးေတြ အတုယူစရာေလးေတြရသြားမွာေပါ့ဗ်ာ....ဇာတ္လမ္းအညႊန္းနဲ႕ဘာသာျပန္သူကေတာ့ JtheKoala ျဖစ္ပါတယ္... File Size : (850 MB) and (319 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:30:00 Genre : Comedy, Drama, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by JtheKoala Encoded by Phyo Pyae
Fortress of War (2010) Fortress of War (2010) IMDb - 7.5/10_____Rotten - 75% ဒီကားလေးကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ရရှား စစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ နာဇီတွေဟာရရှားနိုင်ငံကို ကျုးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ထားတာပါ ။ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်သာမန်စစ်ကားတွေထက်ပိုထူးခြားပါတယ်၊ ကြည့်ရတာကောင်းတယ်လို့အာမခံတယ် ပြီတော့ဒီဇာတ်ကားမှာအခြားဇာတ်ကားတွေမတူစစ်တိုက်နေတာချည်းမဟုတ်ဘဲမိသားစုနဲ့ပက်သက်တဲ့dramaအခန်းလေးတွေလဲပါတယ် အဲ့အခန်းလေးတွေကလဲဇာတ်ကားကိုပိုပြီးရသမြောက်စေတာ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဇွန်လ မှာ ဂျာမန်တွေဟာ ရရှားနယ်စပ်ကိုကျုးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ဘရက်စ်ခံတပ် အကြောင်းကိုရိုက်ထားတာပါ ဘရက်စ်ခံတပ်မှာ ဘယ်လိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို စစ်အတွင်းမှာပြေးလွှားရင်းအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ အလက်ဆန်းဒါအာကီမိုဗစ် ဆိုတဲ့ကောင်လေးက စစ်ဖြစ်ပြီးအနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာမှ စာအုပ်ရေးခဲ့တာပါ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ဗိုလ်မှူးPyotr Mihailovich Gavrilov ပါတီနိုင်ငံရေးအရာရှိ Efim Moiseevich Fomin နဲ့ ဒုဗိုလ် Andrey Mitrofanovich တို့ကအဓိက ဦးဆောင်ပြီးခုခံခဲ့တာပါ ဂျာမန်တွေ ဟာဘရက်စ်ခံတပ်ထဲကို ရရှားစစ်သားယောင်ဆောင်ဝင်ပြီး အစာရေဆာဆေးဝါးပြတ်လတ်အောင်လုပ်တယ် ရေတောင်မသောက်ရဘဲသူတို့တိုက်တာ ရက်တော်တော်ကြာတယ် တော်တော်လဲစိတ်ဓာတ်မာတယ် သူတို့ဆက်ပြီး မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ဖောက်ထွက်ပြီးတိုက်တာသူတို့ရှုံးသွားတယ် ဂျာမန်တွေကလည်းခံတပ်ကိုသိမ်းပိုက်သွားတယ် သူတိုက်ကိုယ်တိုက် နောက်ဆုံးမင်သားရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်သွားအဲ့လိုကားတွေထက်စာရင်ဒီကားကပိုကောင်းပါတယ် ကုန်ရကျိုးနပ်မယ်လို့အာမခံပါတယ်(ရုရှားနာမည်တွေပါတဲ့အတွက်ဘာသာပြန်တာအမှားအယွင်းရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်) Size - 990 MB Qty - 720p Bluray Duration ...
13 Assassins (2010) 13 Assassins (2010) IMDb - 7.6/10_____Rotten - 95% ၁၉၆၃ ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်..ဂျပန်ဒါရိုက်တာတွေထဲမှာအထင်ကရအဖြစ်ဆုံး Takashi Miike ရိုက်ကူးထားပါတယ်...အာရှရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုရရှိခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး Editor ဆု၊အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု၊အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာဆုအပြင်အခြားဆုများစွာအတွက် ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်...IMDB 7.6 အထိရရှိခဲ့ပြီးအရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ ၁၈၄၀ ကျော်လောက်က ဂျပန်ဆာမူရိုင်းခေတ်ကိုအခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်က ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟာအာဏာရှင်စနစ်အသွင်ရှိခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်သူကို'ရှိူဂန်'လို့ခေါ်ပါတယ် 'ရှိူဂန်'ရဲ့ညီတော်ဖြစ်သူနာရိဆူဂူဟာမောက်မာရိုင်းစိုင်းပြီး သနားညှာတာမှုကင်းမဲ့သူပါပြည်သူတွေအပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေကြောင့် ပုန်ကန်ထကြွမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နာရိဆူဂူဟာပုန်ကန်သူတွေကိုလည်းရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဆရာဒွိုင်ဟာ နာရိဆူဂူရဲ့ဆိုးယုတ်မှုတွေကို ဖြိုခွင်းဖို့အတွက်ရှီမာဒါရှင်ဇဲမွန်ဆိုသူကိုစေခိုင်းခဲ့ပါတယ် ရှီမာဒါရှင်ဇဲမွန်ဟာ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အတော်ဆုံးဆာမူရိုင်းတွေကိုစုစည်းပြီး နာရိဆူဂူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲခဲ့ပါတယ် ရှီမာဒါရှင်ဇဲမွန်နဲ့သူ့တပ်ဖွဲ့တွေနာရိဆူဂူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းကြမလဲ သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကရော အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဆက်လက်ရှူ့စားကြပါစို့... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Lyric Lynn Khant ဖြစ်ပါတယ်... File Size : (800 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:21:00 Genre : Action, Adventure, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Lyric Lynn Khant Encoded by ...
The Town (2010) The Town (2010) IMDb - 7.5/10_____Rotten - 93% FBI ရဲတွေ ဒေါသအရမ်းထွက်နေကြတယ်...FBIအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း ဆဲဆိုသံနဲ့အတူ " ဒီသောက်ဘဏ်ဓားပြတွေက သောက်ချဉ်တော့မဟုတ်ဘူးကွ" ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေတယ်... ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်ခံရပြီး အချိန်မီ အချက်ပေးသံကြောင့် ဘဏ်ကိုရဲတွေဝိုင်းခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်မှမမိလိုက်ဘူး.. ..မှုခင်းသဲလွန်စတွေရှာပြန်တော့လည်း cctv မှတ်တမ်းတွေဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင် လက်ဗွေရာတစ်စွန်းတစ်စတောင် မကျန်အောင် ဆပ်ပြာရည်တွေ ဘဏ်အတွင်းပက်ပြန်းသွားလို့ပါပဲ....တစ်ခုတော့ရှိတယ် ... ဘဏ်ဓားပြတွေက ဓားစာခံအဖြစ် ဘဏ်စာရေးမတစ်ယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်.. ..ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာက Ben Affleck ဖြစ်ပါတယ်... Gone Baby Gone ကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကားမှာ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကိုကြည့်ဖူးသူတိုင်း မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါ... မှုခင်း ဘဏ်ဓားပြ နဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ အချိုးကျတင်ဆက်ထားလေတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးလို့.... FBI ရဲေတြ ေဒါသအရမ္းထြက္ေနၾကတယ္...FBIအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ဆဲဆိုသံနဲ႔အတူ " ဒီေသာက္ဘဏ္ဓားျပေတြက ေသာက္ခ်ဥ္ေတာ့မဟုတ္ဘူးကြ" ဆိုၿပီးေအာ္ဟစ္ေနတယ္... ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္ကိုဓားျပတိုက္ခံရၿပီး အခ်ိန္မီ အခ်က္ေပးသံေၾကာင့္ ဘဏ္ကိုရဲေတြဝိုင္းခဲ့ေပမယ့္ တစ္ေယာက္မွမမိလိုက္ဘူး.. ..မႈခင္းသဲလြန္စေတြရွာျပန္ေတာ့လည္း cctv မွတ္တမ္းေတြဖ်က္ဆီးသြားတဲ့အျပင္ လက္ေဗြရာတစ္စြန္းတစ္စေတာင္ မက်န္ေအာင္ ဆပ္ျပာရည္ေတြ ဘဏ္အတြင္းပက္ျပန္းသြားလို႔ပါပဲ....တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ... ဘဏ္ဓားျပေတြက ဓားစာခံအျဖစ္ ဘဏ္စာေရးမတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းေခၚသြားပါတယ္.. ..ဒီကားရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာက Ben Affleck ျဖစ္ပါတယ္... Gone Baby Gone ကိုလည္း သူကိုယ္တိုင္႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီကားမွာ ...
Super(2010) Super(2010) IMDb.....6.8 2010 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အလန်းစား Superhero ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် Superhero Comedy ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ IMDB 6.8 အထိတောင်ရခဲ့တာလဲ..ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ Guardian of the Galaxy ကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ပဲဖြစ်ပါတယ်...ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ဟာသမင်းသားကြီး Rainn Wilson က ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးနာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Ellen Page နဲ့ Liv Tyler တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကလူတွေရဲ့အနှိမ်ခံဘဝနဲ့နေထိုင်လာရတဲ့ ဖရန့်ခ်ဒါဘို (Rainn Wilson)ရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာတော့ psycho အသေးစားလေးတစ်ခုစွဲကပ်ခဲ့ပါတယ်...အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း မိန်းမဖြစ်သူ'ဆာရာ'(Liv Tyler)ဟာ သူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီး 'ဂျော့ခ်'ဆိုတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ် 'ဂျော့ခ်'ဆိုတဲ့သူဟာလည်း ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဖရန့်ခ်ရဲ့စိတ်မှာ စွဲကပ်နေတဲ့ psycho တွေဟာကြီးမားလာပြီးသူဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကာ ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းပါတော့တယ် သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုသဘောကျနေတဲ့ 'လစ်ဘီ'(Ellen Page)ဆိုတဲ့ ချာတိတ်မတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်အတူပူးပေါင်းမိခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့ ဖရန့်ခ်နဲ့လစ်ဘီဟာ 'ဆာရာ့'ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ...
Kick-Ass (2010) Kick-Ass (2010) IMDb - 7.6/10_____Rotten - 76%ကျွန်တော် အမြဲလိုလို မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို သူမေးခဲ့တယ်။ Superheroes ရုပ်ရှင်ကားတွေ စာအုပ်တွေ လူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားတွေမှာ အမြဲလိုလို ပါတတ်ပေမဲ့ တစ်ကယ့်လက်တွေ့ဘဝတွင်တော့ ဘာလို့မရှိရတာလဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဦးဆောင်ပြီးဘာလို့စ မလုပ်တာလဲ။ ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်ကို လူသားတွေဟာ စောင့်နေကြတာလား။ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကူးတွေထဲမှာပဲ Batman တို့ Iron Man တို့ကို အားကျပြီး လက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့ မိမိရ ဲ့ရိုးရှင်းလှတဲ့ ဘဝမှာပဲ နေ့စဉ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်ကြတာလား။ Kick Ass ကတော့ လူသားတွေ Superheroes ဇာတ်ကားတွေ အားပေးကြည့်ရှုကြပြီး တစ်ကယ့်အပြင် လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဘာကြောင့် တစ်ယောက် တစ်လေမှ ဝတ်စုံဝတ် မျက်နှာဖုံးလေးတပ် ကျရာ လက်နက်လေးတစ်ခု ဆွဲကိုင်ပြီး လောကကြီးကို မထွက်လာကြတာလည်း ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ Superheroes ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ကြတယ်။ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ရင်ခုန်ကြတယ်။ နှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘယ်သူ့မှ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်မျိုးတွေ မလုပ်ကိုင်ကြဘူးလေ။ အဲ့ဒီ့မှာ စပြီးတော့ ...
The King’s Speech (2010) The King's Speech (2010) IMDb - 8.0/10_____Rotten - 95% Won4Oscars. Another 106 wins & 204 nominations သိက္ခာက အင်္ဂလိပ်တွေအတွက် အသက်၊ လွတ်လပ်ခြင်းက အမေရိကန်တွေအတွက် အသက် ၊ စည်းကမ်းက ဂျပန်တွေအတွက် အသက် .......... ဒီဇာတ်ကားက သမိုင်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်အတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း ရိုက်ကူးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရိုက်ကူးသူ၏ စိတ်လိုရာ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး လိုသလို အနုပညာကို အစွမ်းပြထားသည့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ နေရာကာ ဘာကင်ဟမ်နန်းတော် ကိုယ်အရူးအမှုးချစ်ရတဲ့ အချစ်အတွက်ချစ်သက်သေပြဖို့ ၊တာဝန်ယူဖို့၊ မသိပ်ငယ်စေဖို့၊ သမိုင်းမှာ ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးထဲကတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမယ့် လက်မှတ်တစ်ချက်ကို ကိုယ်စာရွှက်ပေါ်မှာထိုးလိုက်ပါပြီ။ အနုပညာပိုင်းရော ငွေကြေးပိုင်ရောမှာပါ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီသမိုင်းရုပ်ရှပ်ကို The Weinstein Company နဲ့ Momentum Pictures တို့ဖြန့်ချီထားခဲ့ပါတယ်။ IMDb 8/10 ၊ Rotten Tomatoes 95% ၊ Common Sense5/5၊ CinemaScore A+ တို့ ရရှိထားပါတယ်။၂၀၁၀ စက်တင်ဘာမှာ ...
Liar Game: The Final Stage (2010) သင္ လူေတြကို အလြယ္တကူယံုၾကည္တတ္ပါသလား... ရိုးသားလြန္းတဲ့...ယံုၾကည္လြယ္လြန္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖို႕ ယေန႔ေခတ္ၾကီးမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္ရတာ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းလွပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လိမ္ရတဲ့ကစားပြဲတစ္ခုမွာဆိုရင္ေတာ့ ပိုဆိုးျပီေပါ့။ ဒီ Liar Game ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးက ဂ်ပန္ကားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ ၾကည့္ေပ်ာ္ေစမယ့္ ဇာတ္ကားေလးပါ။ လွည့္ကြက္မ်ားစြာနဲ႔ တေျဖးေျဖးဆြဲေဆာင္သြားတဲ့ ဒီဇာတ္ကားေလးဟာ IMDb Rating (7.3) ထိရရွိထားပါတယ္။Liar Game ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္စီးရီးကို အေျချပဳဖန္တီးတင္ဆက္ထားျပီး ကိုရီးယားစီးရီး Liar Game အျဖစ္လဲ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။Liar Game ဇာတ္ကားအဆက္ Liar Game 2:Reborn ဇာတ္ကားလဲ ၂၀၁၂ မွာထပ္မံထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္...https://channelmyanmar.org/?s=liar+game မွာရွာပါ။ File size…(999 MB) and (420MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:13:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya AungTranslated by Daniel Sharman
The A-Team (2010) Non-stop Action ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ The A-Team ကို ဒါရိုက်တာ Joe Carnahan ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး IMDb 6.8 ရရှိထားပါတယ် *ဆေးပြင်းလိပ်ခဲပြီး အစီအစဉ်ဆွဲရတာဝါသနာပါတဲ့ ကာနယ်ဟန်နီဘယ်စမစ်အဖြစ် Liam Neeson* မျက်နှာများတဲ့ စော်ကြည်ဘဲ Face အဖြစ် Bradley Cooper *ခွန်အားဗလကြီးသလောက် အသည်းငယ်တဲ့ ဘီအေဘရာကပ်စ် အဖြစ် Quinton*a *ဂေါက်ကြောင်စကားလုံးတွေကြောင့် ရယ်မောကြရမယ့် မားဒေါ့အဖြစ် Sharlto Copley* တို့က ဦးဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ် ကာနယ်ဟန်နီဘယ်စမစ်ဦးဆောင်သော လူလေးဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အယ်လ်ဖာတပ်ဖွဲ့ဝင် များဟာ စွန့်စားစစ်ဆင်ရေးတွေ ထမ်းဆောင်ရာမှာ ပျော်မွေ့ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ် ဒေါ်လာရိုက်နှိပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပျောက်ဆုံးပုံနှိပ်တံဆိပ်ပြားများ ဘက္ကဒက်တွင် ရောက်ရှိနေသည်ဟုသတင်းရပြီး ကာနယ်စမစ်နှင့်အဖွဲ့က ပြန်လည်လုယူခဲ့ကြပါတယ် ထိုတံဆိပ်ပြားများကို ခိုးယူရောင်းချလိုသူများထဲတွင် ထိပ်ပိုင်းအရာရှိများလည်းပါဝင်ခဲ့ရာ.......စကားချပ်။ ။ ကျည်ဆံများဇာတ်ကားထဲမှထွက်လာပြီး ထိမှန်နိုင်သောကြောင့် ကျည်ကာဝတ်၍ ကြည့်ကြပါကုန်။ File Size : (956 MB) and (327 MB) Quality : BluRay 1080p Running Time : 1hr 57min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source ...
The Last Song (2010) ကဲ ႐ိုမန္တစ္​ဆန္​ဆန္​ကား​ေလး​ေတြၾကည္​့ခ်င္​သူ​ေတြအတြက္​ ဇာတ္​ကား​ေကာင္​း​ေလးလာပါၿပီThe last song ဇာတ္​ကား​ေလးဟာ 2010ခုႏွစ္​ကထြက္​႐ွိထားတဲ့ romance ႐ုပ္​႐ွင္​ဇာတ္​ကားတစ္​ကားျဖစ္​ၿပီး Imdb rating 5.9/10ရ႐ွိထားပါတယ္​သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ထားသူ​ေတြက​ေတာ့ အဆို​ေတာ္​ မိုင္​လီဆိုင္​းရပ္​စ္​နဲ႔ခ်စ္​သူမင္​းသား​ေခ်ာ Liam Hemsworthတို႔ျဖစ္​ပါတယ္​...Liam ကိုအရမ္​းခ်စ္​တဲ့မိုင္​လီတစ္​​ေယာက္​ ဘယ္​လိုအသက္​ပါပါသ႐ုပ္​​ေဆာင္​သြားမလဲဆိုတာ စိတ္​၀င္​စားစိတ္​၀င္​စားစရာပါဇာတ္​လမ္​းအက်ဥ္​းက​ေတာ့ဆယ္​​ေက်ာ္​သက္​​ေကာင္​မ​ေလး Ronnie ဟာ မိခင္​ျဖစ္​သူနဲ႔သာ​ေနရတဲ့​ေကာင္​မ​ေလးျဖစ္​ပါတယ္​....​​ေႏြရာသီ​အားလပ္​ရက္​​ေရာက္​တဲ့အခါ မိခင္​ျဖစ္​သူက Ronnie နဲ႔​ေမာင္​ျဖစ္​သူကို ကြဲကြာ​ေနတဲ့ဖခင္​ဆီ ပို႔လိုက္​ပါ​ေတာ့တယ္​...ဖခင္ကိုအျ​​မင္မ​ၾကည္​တဲ့ Ronnie ကို ဖခင္​ျဖစ္​သူမွ ၂​ေယာက္​စလံုး၀ါသနာပါတဲ့သီခ်င္​း​ေတြနဲ႔ Ronnie တစ္​​ေယာက္​ စိတ္​​ေ​ျပသြားေအာင္​ဆြဲ​ေဆာင္​ပါ​ေတာ့တယ္​.....Ronnie လည္​း ၿမိဳ႕ခံနယ္​သား​ေလး တစ္​​ေယာက္​နဲ႔ခ်စ္​ႀကိဳက္​မိပါ​ေတာ့တယ္​....Ronnie ဖခင္​နဲ႔ျပန္​​ေျပလည္​သြားမလား....အခ်စ္​​ေရးက​ေရာ​ေျဖာင္​့ျဖဴးမွာလားဆိုတာ ၾကည္​့႐ႈလိုက္​ပါဦး​ေနာ္​ File Size : (900 MB) and (330 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 47min Format : Mp4 Genre :Drama, Music, Romance Subtitle : Myanmar ...
Never Let Me Go (2010) Never Let Me Go (2010) IMDb - 7.1/10_____Rotten - 70% Kathy, Tommy, Ruth ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း ၃ယောက်ဟာ ကျေးလက်တောရွာလေးတစ်ခုက မိဘမဲ့ကျောင်းမှာတအတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့။ ထူးခြားတာတစ်ခုက အဲ့ဒီကျောင်းလေးကသာမန်ကျောင်းလို့ထင် ရပေမယ့် ကျောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်က ကလေးတွေအတွက်အရမ်းကိုခါးသီးလွန်းတဲ့ အပြင် ကလေးတွေမှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိပဲ အဲ့ဒီခါးသီးတဲ့လမ်းကိုပဲတစ်သက်လုံးလျှောက်လှမ်းကြရမှာပါ။ သူငယ်ချင်း ၃ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်၊ အချစ်စိတ်တွေ သဝန်တိုမှုတွေ ကြားဝင်ဖြတ်စီးခံရမှု တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာဘဝလမ်းခရီးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ..... မိဘမဲ့ကျောင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကဘာဖြစ်မလဲ.... ...ဒါရိုက်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဘိုး...စတေးခံတွေရဲ့ဘဝ...ဘယ်သူတွေက ချမ်းသာတဲ့သူလဲ.. လူသာချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတာဘာလဲ...ဘယ်သူတွေကစာနာတတ်တဲ့လူလဲ...စတာတွေကိုပြချင်တာပါ... ပြီးတော့ ဒီကားထဲက သရုပ်ဆောင် (၃)ယောက်ဖြစ်တဲ့ Carey Mulligan, Kiera Knightley မင်းသား Andrew Garfield တို့ကိုအားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသားပါ... စပိုက်ဒါမင်းသား အဖြစ်လူသိများတဲ့ Andrew Garfield ဟာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆုရသွားပါတယ် .. အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆု အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့ဆုတွေ ဇကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်. ဖျော်ဖြေရေးဆန်တဲ့ကားမဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ချို့သူတွေကဆိုလိမ့်မယ်... သို့ပေမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါလို့recommend လုပ်ပါရစေ.. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ ညီမငယ်JtheKoala ဖြစ်ပါတယ် Kathy, Tommy, Ruth ဆိုတဲ့သူငယ္ခ်င္း ၃ေယာက္ဟာ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေလးတစ္ခုက မိဘမဲ့ေက်ာင္းမွာတအတူတူႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတဲ့ကေလးေလးေတြေပါ့။ ထူးျခားတာတစ္ခုက အဲ့ဒီေက်ာင္းေလးကသာမန္ေက်ာင္းလို႔ထင္ ရေပမယ့္ ...
Udaan(2010) Udaan(2010)IMDb....8.2တစ်ချို့သောမိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ၊အကြင်နာတွေကို ကလေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ရောက်မှ ခိုးနမ်းရင်း ပြကြတယ်...ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီလိုလုပ်ကြလဲမေးရင် သူတို့ရဲ့ပျော့ညံမှုကို သားသမီးတွေ မမြင်စေလိုတာရယ်တစ်ကြောင်း တစ်အားချစ်မှန်းသိရင်ကလေးကို ဆုံးမရခက်မှာစိုးရိမ်လို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးဖြေကောင်းဖြေကြပါလိမ့်မယ်....မိဘတစ်ချို့ဟာ ကလေးစကားစပြောတတ်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့အများဆုံးဘာသင်လဲဆိုတော့ သားလေး သမီးလေး ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အမေးစကားကို ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်...အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေစကားပါပဲ....ဧည့်သည်တွေ ဆွေမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဒီကလေးတွေရဲ့အဖြေဟာ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ခဲ့သလိုအရွယ်ရောက်လာရင်လည်း ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပုံသွင်းကြတယ်...တစ်ချို့သောကလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် ၀ါသနာနဲ့နှလုံးသားရဲ့မြတ်နိုးရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက် အနာဂတ်ဟာ ဝေ၀ါးသွားတတ်တယ်....နားလည်ပေးနိုင်တဲ့မိဘမျိုးဆိုအဆင်ပြေပေမယ့် အတ္တအနည်းငယ်ကြီးတဲ့မိဘမျိုးရှိသူ ကလေးအတွက်တော့ လမ်းမှားတောင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်....ဒီကားက အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့ မိဘနဲ့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ သားတစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာပါ.....အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေရဲ့အကောင်းဆုံး(၄၆)ကားစာရင်းထဲပါခဲ့သလို၊အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု၊အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းဆု၊အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆုနဲ့အခြေားဆုပေါင်းများစွာရရှိထားပါတယ်....ဒီကားမဒေါင်းခင်ကြိုပြောလိုတာက မင်းသမီးမပါသလို ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ အကတွေ သမီးရည်းစားအချစ်ခန်းတွေမပါဘူး....ပညာပေးကားတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာ အိန္ဒိယကားတွေဟာ အဆန့်အတန်းရှိကြောင်းခင်ဗျားဟာဒီကားကြည့်ပြီးသတိထားမိသွားလိမ့်မယ်..အယ် အစကထဲက သတိထားမိပြီးသားဆိုရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ အဆင့်အတန်းရှိပညာပေးကားစာရင်းမှာUdaan ဆိုတဲ့ကားကို စာရင်းထပ်သွင်းလိုက်မှာ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံရဲတယ်....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့Lyric Lynn Khant ဖြစ်ပါတယ်.....File Size…(900MB) and (400MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…02:14:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo Pyae Translated by Lyric Lynn Khant